Imidwebo emisha ye-MacBook Pro ne-SSD entsha ye-Mac Pro, "mahhala" ama-AirPod nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwaMac | Ngivela kwa-mac
Imidwebo emisha ye-MacBook Pro ne-SSD entsha ye-Mac Pro, "mahhala" ama-AirPod nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Ngaphezulu nje kwamahora angama-24 futhi sesivele sinombhalo osemqoka weWWDC walo nyaka oqhubekayo. Sonke siyesaba ngakho futhi akungabazeki ukuthi inkampani yaseCupertino izimisele ukukhombisa izindaba zayo zesoftware (futhi mhlawumbe nezekhompyutha) kuwo wonke umuntu. Lawa amahora ezinzwa nokungezwani ezinhlangothini zombili zesithiyo, kepha kufanele siqhubeke nento yethu futhi kulokhu sihamba Okuvelele kwesonto ngivela kwa-Mac.
Asikwazi ukuqala nganoma yiziphi ezinye izindaba ngaphandle kwesengezo esisha sabasebenzisi be- 16-intshi iMacBook Pro neMac Pro. Esimweni sokuqala ikhadi levidiyo eliphezulu futhi kwesibili isitoreji esikhulu se-SSD. Lezi zici ezintsha ziyakhethwa ukumisa okokusebenza ngokunambitheka komthengi futhi sethulwe kulo Lwesibili olwedlule.
Siyaqhubeka nenye into yezindaba kusuka ngalo uLwesibili olufanayo lapho okokuqala emlandweni we i-AirPods Pro, inkampani ibangezela "mahhala" ekuthengeni ithimba lasenyuvesi. Bavame ukunikela ngama-headphone we-Beats, kepha kulo nyaka kufike ama-AirPod.
Enye yezindaba ezivelele zesonto ukuthi kwenzeka kanjani kwi-WWDC ngayinye igama elingenzeka le-macOS entsha. Lo ngumbuzo ohlale uza ngalezi zinsuku futhi manje usuphinde futhi: IMammoth, iMonterey noma iSkyline okungaba amagama we-macOS 10.16 entsha
Ekugcineni i- ukuqashwa kwesakhiwo sehhovisi eBarcelona kwabamangaza abasebenzisi abaningi. Kulokhu kunjalo ibhilidi lehhovisi eliphambi kwesitolo i-Apple Store ePasseig de Gràcia, futhi enendawo engamamitha-skwele angama-9.000 okuyi-6.000 ayoba ngamahhovisi akwa-Apple.
Siyaqhubeka namalungiselelo okwethulwa kosuku lwangakusasa, ungasiphoxi!
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Imidwebo emisha ye-MacBook Pro ne-SSD entsha ye-Mac Pro, "mahhala" ama-AirPod nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
IDisney + ayisanikeli ngenyanga yesivivinyo samahhala
I-Apple ivala ezinye izitolo e-US ngenxa yokuqubuka kwe-COVID-19